Somaliland: “Cid Aan Dalka Loo Igman Ayaa Taladiisii Gacanta Ugu Jirtaa, Komishanku Shaqada Ha Isaga Tagaan Haddii Aanay Waxba Qabanayn, - Wargane News
Home Somali News Somaliland: “Cid Aan Dalka Loo Igman Ayaa Taladiisii Gacanta Ugu Jirtaa, Komishanku...
Somaliland: “Cid Aan Dalka Loo Igman Ayaa Taladiisii Gacanta Ugu Jirtaa, Komishanku Shaqada Ha Isaga Tagaan Haddii Aanay Waxba Qabanayn,
Cabdillaahi Jawaan Oo Sababeeyey Si Xeeldheer-Na Uga Hadlay Duruufaha Dalka Ragaadiyey Iyo Sababta Uu Shaqada Uga Tagay
La Taliyihii Madaxweynaha ee Arrimaha Doorashooyinka iyo Xisbiyada qaranka Mudane Cabdillaahi Cabdi Xaaji Cumar (Jawaan) ayaa si adag oo faahfaahsan uga hadlay sababta keentay rasmi ahaan in uu isaga casilo xilkii uu ku magacawnaa ee uu Madaxweynaha Somaliland u igmaday.
Cabdillaahi Cabdi Xaaji Cumar (Jawaan) ayaa sheegay in uu qodobo dhawr ah xilka uga tagay balse ay ugu mudan tahay in aanay jirin cid qaadatay talooyinkii uu u soo jeediyey Madaxweynaha ee ay xilkiisuba ahayd la taliye. Sidoo kale waxa uu masuulkani saxaafadda u sheegay in xaaladda dalku marayso meel halis ah oo aanay jirin ciddii talada lahayd in aanay dalka ka talin ee ay majaraha hayaan cid aan loo igmani. Isaga oo qodobka ugu weyn ku sababeebay mus-dambeedka la hadal hayo in loo samaynayo guddida doorashooyinka qaranka oo uu ka digay cawaaqib xumadeeda.
Cabdillaahi Cabdi Xaaji Cumar (Jawaan) oo arrimahaa ka hadlayaa waxa uu yidhi: “Fadhigii ugu dambeeyey ee Madaxtooyada loogu yeedho Komishanka, madaxtooyada ayuu ahaa Wasiirka Madaxtooyada ayaa u yeedhay Maxamuud Xaashi Cabdi oo ah nin hawl-kar ah. Markii uu u yeedhay anigana wuu ii yeedhay oo waxa uu yidhi waar waadigii aniga iyo Madaxweynaha nagu canaantay waxba ilama socodsiisaane ee koomishankii baannu shir wada leenahee kaalay. Waanu fadhiisanay waxa ay yidhaahdeen naga saar Cabdilaahi. Waa Komishanka Doorashooyinka waxa ay yidhaahdeen naga saar Cabdilaahi. Wasiir Maxamuud waxa uu yidhi waar ninkan Cabdilaahi shaqada ayuu nala leeyahoo waa xilkiisii oo waa la taliyihii Madaxweynaha ee arrimaha doorashooyinka wuu inala leeyahay. Waxa isa soo taagtay illaa aad saarto la hadli maynee ha naga tago. Isna wuxuu yidhi tagi maayo. Markii arrintu sidaa noqotay ayaan anigu go’aansaday in aan meesha isaga tago. Waxa aan arkay shan xubnood oo Komishanka ka tirsan oo aannu qaddarin isku leenahay waxan ay qarsanayaan bal ha u qarsoonaatee iska bax ayaan go’aan ku gaadhay. Markii dambe waxa soo baxay wax la yidhi mus-dambeed. Markaa aniga waxbaa ii sawirmay. Hore waataan u idhi waar nimankaasi waa maxkamade hawshooda haloo daayo hana lagu ilaaliyo. Wixii la qarinayay mus-dambeedkaasi inuu ahaa uunbaan u arkay. Mus-dambeedna umada ma anfacayo komishankuna haddii aanu shaqada qaranka ku filnayn waxaan leehayahay adeer haddii aydaan ka soo bixi karayn ceeb maaha in aad isaga tagtaan oo aad tidhaahdaan ma qaban karayno. Ceeb ma aha aniguna tan waanigan isaga tagay waar idina isaga taga. Haddii kale waxba ha qarsanina waxa la idiin sameeyey waa transparency waxa weeyi in aad xor iyo xalaal ku shaqaysaan weeyi. Inaad tidhaahdaan hebel naga saara waxa weeyi in aad wax qarsanaysaan. Faq fagaare ayuu yimaaddaa waxa weeyi in uu mus-dambeedkaasi yimid. Waxa aan leeyahay komishanku shaqadiisa ha bedelo. Anigu hore talo waxa aan ugu bixiyey in komishanka iyo guddida diiwaan gelinta la is raaciyo. Dalalka adduunka waxa wax diiwaan geliyaa waa guddida doorashada. Madaxweynaha qoraal baan ku siiyey labadaasi guddi in uu is raaciyo oo mideeyo waa is dulsaar (duplicate) uma baahnin komishan kale oo haddana sii dul saran oo lagu sheegay mus dambeed uma baahnin”. Ayuu yidhi Cabdillaahi Cabdi Xaaji Cumar (Jawaan) isaga oo intaasi ku daray:
“Talooyin badan ayaan u qoray Madaxweynaha oo aan siiyey balse waxa ay noqdeen hal bacaad lagu lisay waxba waa la iga dhagaysan waayay. Aniga oo qaddarin ugu haya madaxweynaha. Cidda aan arrimahaa u aanaynayaana maaha madaxweynaha. Dad aan la dooran, dad aan la dooran, dad aan la dooran saddex jeer baan ku celinayaa taasi dad aan la dooran baa masiirka iyo arrimaha umadda gooya. Taana meel ku tagi mayno. Cay iyo cambaarayn anuu meesha keeni maayo mana cambaaraynayo Madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waa Madaxweynahaygii waa nin soo halgamay waa nin qaddarin leh waa oday adeerkay ah sharaf iyo tixgelin baan u ahaa laakiin taladii loo doortay waa baylah runtii markaan ka hadlo waxaana keenaya go’aan qaadashada. Sagaal iyo lixdan wasiir baa magacaaban intuba waxa ay kuyuu ugu jiraan madaxtooyada adeer taasi inna anfici mayso. Qabyaaladda faaftay iyo musdambeedyada xisbiyadii laga dhigay msudambeedyo qabiil waar umadda iyo dalka ma anfacdee halaga daayo”.
Cabdillaahi Cabdi Xaaji Cumar (Jawaan) ayaa sheegay in uu sidoo kale isaga tagay xisbigii KULMIYE ee uu golihiisa fulinta ku jiray waxaanu yidhi: “Anigu xisbiga KULMIYE waan ku jiray guddida fulinta ayaa la igu daray horaan uga tagay. Hore waxaan uga tagay qabiilkaan diiday waxba qarin maayo anuu. Wuxuu ku dhisnaa qabiil nimanbaa markaa ku soo heshiiyey si kursiga madaxtooyada loogu gaadho. Indhahaan ka qarsaday oo waan ka hadlay oo waxaan ku idhi wakhtigaa waar Axmedow, waxaad tahay nin weyn waxaad tahay ninkii la lagaa wuu dhacay Siyaad Siilaanyo dhalay maanta uma baahnid in aad kursiga Habar Jeclo ku timaaddo. Waxaan ku idhi ku dhaado Axmed Maxamed Maxamuud magacaaga reerkana halaga daayo qaab dhismeedkii xisbiga ayaa laga dhigay guddoomiyaha habar jeclo ayaan siinay ku xigeenka Sacad Muuse ayaan siinay ku xigeenka labaad Garxajis oo Habar Yoonis ah ayaan siinay ku xigeenka saddexaad dhulbahante ka afraad Samaroon xoghayaha guud Arab imikana waa sidii uun looma baahna”. Ayuu yidhi Jawaan.
Cali WARRAN-CADDE Oo Sheegay In Somaliya U Diyaar-garoobayso Inay Somaliland Xoog Ku Muquuniso
Somaliland: Yemen’s forgotten refugees are so desperate they’re fleeing to Somalia
Somalia: Dagaalo dhex maray Al-shabaab iyo Ciidamada Dowladda